Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Mac in iPad | Sawiro laga soo Mac in iPad
3 Hababka si ay u gudbiyaan Photos ka Mac in iPad
Hore iMac markii ugu horaysay ee aan PC tagay. Waxa ay ahayd Macintosh Mashiinka hore u leedahay dekedda USB ah si kastaba ha ahaatee ma drive goobo kumbiyuutarka. Sidaa awgeed, Macs oo dhan ayaa waxaa ka mid USB. Iyada oo dekedda USB ah, qalabka saarayaasha ayaa laga yaabaa waxyaabaha kaamil ah labada kumbiyuutarada x86 iyo Macs. Dhinaca kale, iPad waxaa lagu gartaa in ay mid ka mid ah kiniiniyada ugu saameynta badan dunida oo dhan. Waxa uu abuuray sabab u ah kiniiniyada kale in la jirin in suuqa iyo weliba. iPad waxaa loo isticmaali karaa in la sameeyo oo dhan kooxood oo maalin kasta in aad sameyn on your computer ama laptop, weli taas oo ka dhigaysa fudud tan iyo iPad waa mid aad u anfacaya. Xawaaraha aad u fiican iyo bandhigay tayo fiican ayaa loo ogol yahay in ay keeni Apple warshadaha Alwaaxdii waxaana tan iyo bilowga. Hadda qof kasta oo doonayo iPad. Waxaa lagama maarmaan ah inaad ogaato sida loo ka iMac iyo iPad wareejiyo sawiro aad, si aad u soo karaa iyo mahad sawirada waqti kasta iyo meel kasta.
Habka 1. Sida loo Isticmaalo Lugood si ay u gudbiyaan Photos ka iMac in iPad
Habka 2. Sida loo Isticmaalo Wondershare TunesGo Retro si ay u gudbiyaan Photos ka Mac in iPad
Habka 3. 3 iPad Apps inuu u dhaqaaqo Photos on Mac in iPad
Habka 1. Isticmaal Lugood si ay u gudbiyaan Photos / Sawiro ka Mac in iPad
Sida aad ogtahay, Lugood u Mac ku siinayaa awood u leeyahay inuu sawiro ka iMac wareejiyo iPad. Sawiradaas waxaa lagu badbaadi doonaa Maktabadda Photo ah. Ka hor inta soo socda habkan, hal baan idin waa in aad u cad, in uu yahay, Lugood saari doonaa dhammaan photos jira marka photos in iPad wareejinta. Sidaas darteed, inaad si fiican u malaynayso labo jeer haddii aad dhab ahaan doonayaan in ay sawiro si iPad wareejiyo ka iMac la Lugood.
Si kastaba, halkan waa tutorial ah. Fadlan ka eeg. Tallaabada 1. Open Lugood on iMac iyo xiriiriyaan iPad in iMac la cable USB ah. Your iPad dhowaan la baari doono Lugood iyo muujiyay Lugood uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Hadda riix tab Photos waa noo dhow yahay meel la mid ah badhanka iPhone hore.
Tallaabada 3. Sax nidaameed Photos ka oo ay doortaan in ay u hagaagsan oo dhan ama soo xulay sawiro. Markaas, waxaad tagtaa dhankiisii ​​midig hoose guji codso.
Habka 2. Isticmaal TunesGo Retro si ay u gudbiyaan Sawiro / Photos ka Mac in iPad
TunesGo Retro (Mac) waa software ah desktop caan ah, kaas oo ah Saaxiibkiis Lugood ah. Sida Lugood, waxa kale oo kuu saamaxayaa inaad sawiro ka Mac wareejiyo iPad. Waxaa xitaa sameeyaa si fiican. Taas waxaa weeyaan, ma ka saari doonaa sawir kasta inta lagu jiro suuqa kala iibsiga sawirka. Taasi micnaheedu waa in, ka Mac kasta oo aad iPad aad sawiro ku wareejin karaa. Hoos waxaa ku qoran
Tallaabada 1. Download kala iibsiga sawir Mac iPad ah Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay PC ah Windows ku salaysan, isku day Wondershare TunesGo Retro (Windows) si ay sawiro ka PC wareejiyo iPad.
Tallaabada 2. Connect Mac la iPad via cable USB ah. Wondershare TunesGo Retro (Mac) lagu ogaan doonaa iPad iyo muujiyaan ay info uu furmo suuqa laga bilaabo.
Tallaabada 3. Riix "Sawirro" khaanadda tagay si ay daaha ka furmo suuqa Photos. Markaas waxaad ka arki kartaa icon "Add" on sare ee daaqadda. Waxaa Click to dhirtuba your computer Mac sawiro aad rabto in lagu wareejiyo si iPad. Ka dib markii ay u helaan, iyaga dooro, oo guji "Open". Ka dibna waxaad arki doonaa baararka horumarka muujinaya habka wareejinta.
Photo Transfer App u fasaxaya in aad si degdeg ah u gudbiyaan sawirro aad u dhexeeya iPhone, iPad, Mac ama PC isticmaalka network WiFi xaafadda. Waxaa ka shaqeeya ee macruufka 5.0 ama ka dib. Waxa kale oo ay kaa caawinaysaa in aad u qeexaan hawlaha ay u baahan yihiin in la sameeyo marka hore iyo hawlaha waxa la qaban karo ka dib, sidaa darteed xaq ahna ay caan adduunka oo dhan marka ay timaaddo soo gudbin qaybsi dhexmara qalabka iyo computer sida iMac iyo iPad.
Baro wax badan oo ku saabsan Photo Transfer App >>
( https://itunes.apple.com/hk/app/photo-transfer-app-easily/id365152940?mt=8 )
Raac tallaabooyinka hoose si aad u fudud nuqul sawiro ka Mac in iPad
Tallaabada 1. Waa in aad hubisaa in aad iPad iyo Mac isticmaalayso network WiFi isku mid ah. Tallaabada 2. Transfer Photo App loo baahan yahay in la ordi on your iPad hore.
Tallaabada 3. Orod Transfer desktop Photo ah App aad Mac. Ka dib markii in, dooro 'Baro Qalabka' button.
Tallaabada 4. Dooro sawirada si ay u gudbiyaan uu furmo suuqa soo socda.
Tallaabada 5. Riix 'Upload Album si' badhanka si ay u bilaabaan kala iibsiga.
WordPress waa maamulka fududeynta rikoor ah. Macaamiisha isticmaali kartaa WordPress si ay u sameeyaan baqshad caadi ahayn mid kasta oo laptops ama kombuyuutarada waxa ay sidoo kale isticmaalaan qorshe freemium garoomada, halkaas oo macaamiisha waxaa la bixiyaa record lacag la'aan ah size iyo kaydinta go'an iyo bixiyo xubin u diiwaanka la xadka ka badan. Dhamaan macaamiisha aasaasiga ah waxaa la bixiyaa laga bilaabo 2 GB ee qolka lagu kaydiyo free online. WordPress waxaa si balaadhan looga isticmaalaa sawiro iyo file kale wadaagga ah ee iPad. Waxay bixisaa kaydinta ilaa 100GB lacag gaar ah oo kor u kacsan 99 $ sano ah. Lacagtani waa quruxsan macquul ah ee adeeg ay bixiso.
Baro wax badan oo ku saabsan DropBox >>
Halkan waxa ku jira tallaabooyin ay sawiro ka iMac in iPad: Tallaabada 1. Ka WordPress lagu rakibay on your Mac . Tallaabada 2. Daahfurka WordPress on your computer iyo dooran folder Dadweynaha iyo jiididda-n-hoos u sawirkaaga files u galay.
Tallaabada 3. Ku rakib WordPress on your iPad iyo furi folder Dadweynaha inaad kala soo baxdo sawirada. Tallaabada 4. Sidaas, waxaad ka Macbook sawiro sidoo kale ku wareejin kartaa in aad iPad.
Iyadoo Instashare, waxaad si fudud u soo bixi kartaa sawiro laga soo Mac in iPad. Waxaa la socon kara macruufka 5.1.1 ama ka dib. Haddii aadan haysan in la xidhiidhiyo la internetka, si fudud u isticmaali WiFi xaafadda ama Bluetooth in ay sameeyaan kala iibsiga sawir iPad. Ma aha in aad si ka gala email iyo password, halkii, daadanayaan app iyo wareejiyo photos dhexeeya Mac iyo iPad.
Baro wax badan oo ku saabsan Instashare >>
Waa mid wax tar leh inuu u dhaqaaqo photos sameeyaan iMac in iPad dhex talaabooyinkan: Tallaabada 1. Ku rakib Instashare aad Macbook for photos in iPad wareejinta Tallaabada 2. Ku rakib Instashare on your iPad. Tallaabada 3. Jiid sawir galay iPad ah in muujinaysaa ilaa aad app Instashare. Tallaabada 4. Riix "ogolow 'si ay u gudbiyaan Photos ah.
4 Siyaabaha Delete iPad Photos
Bedelka Photos ka iPhoto in iPad
A Guide Full inuu u dhaqaaqo iPhone Photos in iPad
3 Siyaabaha Bedelka Photos ka Computer si ay iPad
2 Siyaabaha Bedelka Photos ka iPod in iPad
7 Apps in Edit Photos on iPad
Top 5 Transfer Apps iPad Photo
Top 5 Camera iPad Apps
2 Siyaabaha la wadaag iPad Music
Nuqul Faylal ay ka iPad in Samsung
2 Siyaabaha Bedelka Playlists Lugood si iPhone
4 Siyaabaha Bedelka iPhone Camera Roll in Computer
> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ama Pictures ka Mac in iPad ama iPad mini